WINDOWS 10 KUGADZIRISA KB5000802 YAKANAMATIRA KURODHA MAAWA? HEANO MAITIRO EKUGADZIRISA - WINDOWS 10
Windows 10 kugadzirisa KB5000802 yakanamatira kurodha maawa? Heano maitiro ekugadzirisa
Microsoft Kudonhedza yakajairika Windows inogadziridza neNew Zvimiro, kugadzirisa kuchengetedzwa, uye gadziriso kugadzirisa Kugadzirisa gomba rekuchengetedza rakagadzirwa nevechitatu-bato kunyorera. Windows 10 yakagadzirirwa kurodha pasi uye kuisa windows inogadziridza otomatiki. Saka Pese panowanikwa matsva matsva windows yekudhawunirodha pachayo. Asi dzimwe nguva Nekuda Kwehuwori system mafaira kana chimwewo chikonzero windows kugadzirisa kunamatira kurodha pasi marefu kwenguva yakareba. Kana iwe ukaona kuti yako Windows 10 Gadziridza KB5000802 wakanamatira kurodha pasi zvinyorwa pa0% kana chero chimwe chinhu mukati Windows 10, pano isu tine mhinduro dzinoshanda kugadzirisa izvi.
Zviri Mukati ratidza 1 Windows yekuvandudza yakanamatira Kurodha pasi 1.1 Tarisa nguva uye marongero enharaunda 1.2 Tarisa Windows yekuvandudza sevhisi inomhanya 1.3 Mhanya Windows kugadzirisa Dambudziko rekugadzirisa 1.4 Nemaoko gadziridza windows yekuvandudza chinhu 1.5 Kugadzirisa Kwakanganisa Windows system mafaira 1.6 Isa Zvidzoreso nemawoko
Windows yekuvandudza yakanamatira Kurodha pasi
Kutanga, ita shuwa kuti une yakagadzikana Internet kubatana Kuti utore iyo Yekuvandudza mafaira kubva kuMicrosoft Server.
Tarisa Chero Chengetedzo Software isingakonzere nyaya, Kana Zvakakwana bvisa iyo antivirus chirongwa kana chero imwe chirongwa chekuchengetedza kubva kune yako system.
Ita bhutsu yakachena uye tarisa zvidzoreso, izvo zvinogona kugadzirisa dambudziko kana paine kupokana-kwechitatu-bato rebasa zvichikonzera iyo windows kugadzirisa yakanamatira.
Tarisa nguva uye marongero enharaunda
Zvakare, zvisirizvo zvematunhu zvigadziriso zvinoita Windows kugadzirisa Kukundikana. Ita shuwa kuti dunhu rako nemitauro yemitauro zviri zvechokwadi
Unogona Kutarisa Uye Kuvaruramisa Kubva Zvirongwa
Dzvanya Nguva & Mutauro
Wobva Wasarudza Dunhu & Mutauro kubva pane sarudzo kuruboshwe.
Pano Ongorora yako Nyika / Dunhu rakarurama kubva pazasi-pasi runyorwa.
Tarisa Windows yekuvandudza sevhisi inomhanya
Dhinda Windows + R, faira services.msc uye zvakanaka
Izvi zvichavhura windows services console,
Bhura pasi uye tarisa Windows yekuvandudza sevhisi iri kushanda.
Zvakare-Right-click paWindows yekuvandudza sevhisi sarudza kutangazve.
Mhanya Windows kugadzirisa Dambudziko rekugadzirisa
Chero iwe paunotarisana neWindows kugadzirisa matambudziko ekumisikidza. Mhanya iyo Vaka muWindows yekugadzirisa chinetso, izvi zvichaona uye kugadzirisa matambudziko anodzivirira windows kugadzirisa kuisa.
Dhinda Windows + I nzira pfupi yekuvhura iyo Zvirongwa app,
Dzvanya paKuvandudza & chengetedzo wobva wagadzirisa
Pano kurudyi-ruoko sarudza Windows kugadzirisa uye tinya unomhanya kunetsa
Izvi zvichaona uye kugadzirisa matambudziko anodzivirira kuisa zvigadziriso
Tarisa Windows yekuvandudza uye ayo akafanana masevhisi anomhanya,
Zvakare, gadzirisazve iyo Windows Gadziriso yezvinhu kuti ive default izvo zvingangobatsira kugadzirisa windows kugadzirisa matambudziko.
Nemaoko gadziridza windows yekuvandudza chinhu
Kana iwe uchiri kunetsekana mushure mekumhanyisa chinetso, kuita zvakafanana zviito nemaoko kungabatsira uko asina kugadzirisa dambudziko. Kudzima windows kugadzirisa cache mafaera ndiyo imwe mhinduro inogona kungokushandira iwe.
Vhura Command Prompt seMutungamiriri wobva wanyora pazasi kuraira imwe neumwe uye rova ​​pinda kuti uite.
net mira wuauserv Kumisa Iyo Windows Gadziridza Sevhisi
net stop bits Kumisa kumashure kwehungwaru kuendesa sevhisi.
Zvino Enda ku C:> Windows> SoftwareDistribution> Kudhawunirodha uye Delete mafaera ese mukati mefaira.
Inogona kukubvunza iwe maneja mvumo. Ipa, Usanetseke. Hapana chinhu chakakosha pano. Windows Dzokorora ichagadzirisa zvayinoda nguva inotevera paunomhanya nayo.
* Ongorora: Kana iwe usingakwanise kudzima dhairekodhi (dhairekitori riri kushandiswa), wobva watangidza komputa yako mu ' Nzira Yakachengeteka ”Uye dzokorora maitiro acho.
Zvino fambisa kune yekuraira Prompt uye tangazve iyo yakamiswa masevhisi kune iyi mhando pazasi kuraira imwe neumwe uye tinya yekupinda kiyi.
net kutanga wuauserv Kutanga iyo Windows Gadziridza Sevhisi
mambure ekutanga mabheti Kutanga Kutanga kwehungwaru hwekufambisa sevhisi.
Kana sevhisi yatanga patsva, unogona kuvhara Command Prompt uye kutangazve Windows.
Ipa Windows Gadziridza imwe kuyedza uye ona kana dambudziko rako rakagadziriswa.
Iwe uchagona kurodha pasi uye kumisikidza izvo zvinobudirira.
Kugadzirisa Kwakanganisa Windows system mafaira
SFC yekuraira iri nyore mhinduro yekugadzirisa mamwe matambudziko ane hukama nemawindows. Kana paine chero akashaikwa kana akaremara system mafaera akagadzira dambudziko Sisitimu Faira Checker kana zvichibatsira kugadzirisa.
windows 10 yekuvandudza mubatsiri anoramba achirodha pasi
Pakutanga mhando yekutsvaga CMD uye Mhanya semubati kana command Prompt yaonekwa.
Pano nyora kuraira SFC / SCANNOW uye rova ​​kiyi yekupinda kuti uite murairo.
Izvi zvichaongorora system yako kune ayo ese akakosha system mafaera, uye woatsiva pazvinenge zvichidikanwa.
Mirira kusvikira Windows ichiongorora uye kugadzirisa mafaira emafaira.
Kana iyo System faira kutarisa uye kugadzirisa kwapera, tangazve komputa yako
Zvino tarisa windows windows kubva kuZvirongwa -> kugadzirisa uye chengetedzo -> tarisa kuti uwane zvidzoreso.
Ndinovimba nguva ino inogadziridza gadza pasina dambudziko.
Isa Zvidzoreso nemawoko
Kana iyo nyaya ichiri kuenderera, iwe unogona kuyedza kuzviitira manyore izvo zvaunotipa mu Microsoft Dzokorora Catalog . Pano tsvaga iyo yekutsanangudza inotsanangurwa nenhamba yeKB yawakanyora pasi. Dhawunirodha iwo marongero anoenderana kana muchina wako uri 32-bit = x86 kana 64-bit = x64.
Semuenzaniso, KB5000802 ndiyo ichangoburwa yemidziyo inomhanya Windows 10 vhezheni 20H2 uye vhezheni 2004.
Vhura iyo faira rakadzingwa kuitira kuti umise iyo yekuvandudza.
Ndizvozvo zvese mushure mekuisa zvidzoreso zvinongotangidza komputa kuti ishandise shanduko. Zvakare Kana iwe uri kuwana windows Kwidziridzwa yakanamatira nepo kusimudzira maitiro uchingoshandisa mukuru mhizha yekugadzira mhizha kusimudzira windows 10 vhezheni 1909 pasina chero kukanganisa kana dambudziko.
Idzi ndidzo mhinduro dzakanakisa dzekugadzirisa windows inogadziridza yakanamirwa kurodha pasi, windows inogadziridza yakanamatira chero nguva kwenguva yakareba pama windows 10 komputa. Ndinovimba mushure mekushandisa izvi mhinduro windows kugadzirisa matambudziko ekugadzirisa achagadziriswa. Zvakadaro, une chero mubvunzo, zano nezve windows kugadzirisa kumisikidza Inzwa wakasununguka kukurukura zvataurwa. Zvakare, verenga:
Maitiro Ekunyatsogadzirisa Windows 10 Performance YeGaming
Gadzirisa Windows yekuvandudza haigone kubatanidza kune yekuvandudza sevhisi (Windows 10)
iTunes Isingashande paWindows 10? Heano maitiro ekugadzirisa
Fix System Kudzorera haina kupedzisa kubudirira paWindows 10
windows dzakundikana kutanga 0xc000000f
dhcp isiri kushanda windows 10
windows 10 tanga menyu chinetso
windows bhatani risingashande windows 10
default gateway haina kuwanikwa windows 10
iTunes haina kuona iphone windows 10
kukanganisa_network_chinjisa windows 10